'ဒီကောင်လေးက အရမ်း Cute ဖြစ်တာပဲ'တဲ့ မကြာခဏအပြောခံရတာကိုကြားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီး ကျွန်တော်က ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေမယ်မထင်ပါနဲ့။ ပိုပြီးရှိုးထုတ်ပြလိမ့်မယ် လို့လည်းမယူဆကြပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆို ကျွန်တော်က အရှက်သည်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဗျ။ ကောင်းသွားလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ သင်တန်းသွားလို့ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေပြီဆိုရင် ခြေလှမ်းတွေမှားကုန်တော့မတတ်ပါပဲ။ အကယ်၍များ ကောင်မလေးတွေက မထိတထိလှမ်းစရင် ကျွန်တော်ထူပူပြီး သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကို သဲသဲကွဲကွဲ မကြားတော့။ အတော်တော့အခက်တွေ့နေပါပြီ။
ကျွန်တော် ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်လာတာ တစ်လလောက်ပဲရှိသေးတဲ့ မြို့သားအသစ်လေး တစ်ယောက်ပါ။ ကျောင်း တွေဖွင့်နေကြပြီဗျ ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်တော့။ ဒါကြောင့် ကျောင်းကို အမှီအပ်ပြီး စာလိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ အခု ဒယ်ဒီက သူတာဝန်ကျရာ ဆေးရုံကြီးကို ပုံမှန်သွား၊ မာမီကလည်း သူ့စီးပွားအကွက်အကွင်းချဲ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့တာ။ မာမီက အချက်အပြုတ်ကောင်းကောင်းကျွမ်းတာ၊ အရင်မြို့မှာတုန်းက စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီး လှုပ်ရှားခဲ့တာများ ဒယ်ဒီ့ ၀င်ငွေလောက်တော့အပျော့ပေါ့။
ဆရာဝန်ကြီးတွေအတွက် ပေးတဲ့ အိမ်ကအတော်ကြီးပါတယ်။ ခြံဝင်းထဲမှာလည်း စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး ကတော့ အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ တရုတ်စကားပင်တန်း နှင့် မြတ်လေးပန်းရုံတွေ။ လသာတဲ့ည ၀ရန်တာထွက်ပြီး ရပ်နေလိုက် လို့ကတော့ လေအလာမှာမွှေးကြိုင်နေတာ။ ကျွန်တော့်အခန်းကလည်း ဘေးအစွန်ကအခန်းဆိုတော့ ၀ရန်တာကျယ် ကျယ်နဲ့ တဆက်တည်း။ ဟီး... နောက်ဖေးကြောင်လိမ်လှေကားနဲ့လည်းနီးတော့ ညဘက်အခွေသွားငှားလို့ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အလည်လွန်ပြီးနောက်ကျရင် အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
အိမ်ရဲ့ဘေးမှာလည်း ခြံကျယ်ကြီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာအများအပြားပါ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ဘေးကတိုက်ကြီးကလည်း ဟီးလို့။ အိမ်အပြင်အဆင်ကလည်းမိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလည်း အဲဒီလိုပြင်ဆင်ဖို့ မာမီ့ကိုပြောရဦးမှာအသေ အချာပဲ။
'ဟင်' ကျွန်တော်အတော်ရှက်သွားမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာကို တစ်ဖက်အိမ်က ကောင်လေးတစ်ယောက်က သေသေချာချာ ပြတင်းပေါက်ကနေကြည့်နေတာဗျ။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ လူရည်သန့်တဲ့ အသွင်အပြင် အပြည့်။ ကျွန်တော့်အသက်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်နည်းနည်းပုတဲ့ပုံ။ ဘာကြောင့်သိလည်းဆို ကျွန်တော့်အရပ်က ၆ပေ၂လက်မရှည်ပြီး ပိန်သွယ်သူမို့ပါ။ အဖေကရှမ်း၊ အမေက ထိုင်းလူမျိုးဆိုတော့ သူတို့ မျက်လုံး မျက်ခုံးနဲ့ အရပ်က စိတ်တိုင်းကျပေါ့။ လူတွေကြားထဲသွားရင် ထင်းကနဲဖြစ်နေတာကိုတော့ မနှစ်မြို့မိပါဘူး။
ကျွန်တော့်အထင် လူတွေကျွန်တော့်စကားပြောတဲ့အခါ ပိုပြီးအာရုံစိုက်စရာဖြစ်သွားတတ်ကြတယ် ထင်တယ် အသံလေ ယူလေသိမ်းခပ်ဝဲ၀ဲကြောင့်လေ။ ပြီးတော့ ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့မျက်နှာ မည်းနက် နေတဲ့မျက်ခုံးမွေး ရှည်လျားတဲ့မျက် တောင်များကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်သွားကြ သေးတာ။
ကျွန်တော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေ ပြောကြတာကတော့ သူတို့ကျွန်တော်စကားပြောသံကို စတင်ကြားရခါစက တစ်မျိုးပဲဆိုပြီး ရယ်မောမိကြသေးသတဲ့။ ထားပါတော့ ကျွန်တော်က တာချီလိတ်မှာမွေးခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုပြောင်း ရွှေ့ခဲ့ရတာ ဒယ်ဒီ့ကြောင့်ပါပဲ။ ဒီကိုမိသားစုတစ်စုလုံးပြောင်းရွှေ့လာတာ အားလုံးပေါင်းမှ သုံးယောက်ထဲ။
ကျောင်းစဖွင့်တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ သုံးလေးပတ်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျောင်းအသစ် နေရာသစ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေမရသေးတော့ တစ်ယောက်ထဲငေါင်တောင်တောင်။ အပြင်လောကက သူငယ်ချင်းရှာမယ်ဆိုရင် လည်းအထာကျဖို့အတော်ခက်တယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ကျွန်တော် အင်တာနက်ကို အမြဲဖွင့်ဖြစ်နေတော့တာ သူငယ်ချင်းရှာဖို့ မိတ်ဆွေတိုးဖို့လေ။ အရင်ဆုံး IM Program တွေသုံးပြီး သူတို့နှင့်စကားပြောတယ် ရင်းနှီးအောင်လုပ် တယ် ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ သူတို့ကိုကျွန်တော့်အကြောင်း၊ ရောထွေးနေတဲ့ နေထိုင်မှုသဘာဝ စတာတွေပြောပြီးမှ Web-cam ကိုဖွင့် ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်အစစ်အမှန်ကိုမြင်စေပေါ့။
'မင်းပြောတော့ အရပ်သိပ်မရှည်ဘူးဆို၊ မျက်လုံးတွေက ၀ိုင်းစက်စက်နဲ့ အတော်ကြည့်ကောင်းတာ၊ ဒါပေမဲ့ မင်းပြုံးတာက လည်း အေးအေးစက်စက်နဲ့' စတဲ့စကားတွေကို ပုံမှန်ကြားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆံပင် အကောက်တွေကို အရောင်ဆိုးထားတာလို့ထင်နေကြတယ်။ ကျွန်တော့်ငယ်နာမည်က ဆံနီလေ။ ဆံပင်လေးတွေက အနက်ရောင်မဟုတ်ပဲ အနီရောင်ဘက်သန်းတဲ့အညိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပေါ့။ အဖေက အသားဖြူပြီး ဆံပင်ကအညိုရောင်နဲ့ လူချောဗျ။
နေ့စဉ်သာမန်အကြောင်းတွေ စကားပြောကြတယ်၊ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း သတင်းပလင်းအစုံ၊ နောက်များမှာတော့ လိင်ကိစ္စအကြောင်းတွေပါထည့်ပြောမိကြရင်း ကျွန်တော့်အတွက် အဦးဆုံး cyber-sex အတွေ့ အကြုံကိုရခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံကို အခုပုံမှန်ပြောမိနေတဲ့ လားရှိုးကတစ်ယောက်နဲ့ စတင်ခဲ့ မိတာပါပဲ။ နာမည်က စိုင်းစံထွန်းတဲ့လေ။ ကျွန်တော်က ကိုမဖွင့်သေးဘဲ စကားပြောနေမိပေမဲ့ သူကတော့ သူ့မျက်နှာကို ကတစ်ဆင့်ပြပြီးပါပြီ။
သူဟာ Gay ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာမလိုအောင် သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေက သိသာပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ သူပြောတဲ့စကား ၊ အသံတွေကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ turn-on ကိုဖြစ်လို့ပါ။ ကိုထွန်းက အသက်တစ်နှစ်ကြီးတယ် ကျွန်တော့် ထက်။ ကြည့်လို့အလွန်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းတက်ဖြစ်လို့ sign in လုပ်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် 'Hey, ငါ့ကောင် ဒီနေ့ရောဘယ်လိုလည်း အိုကေလား' ဆိုတဲ့စကားစုနဲ့ စတင်တော့တာပါ။
တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် သူ့မျက်နှာ၊ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၊သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူဖွင့်ပြတဲ့ Web-cam ကနေတစ်ဆင့်မြင်ရ ပါတယ်။ ဘော်ဒီ အတော်လှတဲ့ ငနဲပါပဲ။ သူ့ဆံနွယ်တွေက မဟူရာရောင်တောက်နေသလို ဖြောင့်စင်းနေတာပဲ။ သူ့မျက် တောင်တွေက ညီညီ ညာညာနဲ့ မျက်ဝန်းတွေက ထင်ထင်ရှားရှား။ မျက်ခုံးမွှေးတွေကလည်း နှာယောင်နားမှာ ဆက်နေ တာ။ တစ်ခါတစ်လေ chatting လုပ်နေရင်း တစ်ခုခုယူတာမျိုး၊ ခုံကိုရှေ့တိုးနှောက်ငင်လုပ်တာမျိုးတွေမှာ မတ်တပ်ရပ်တဲ့ အခါတွေမှာ ခုံးထနေတဲ့ သူ့ပေါင်ကြားကိုမြင်ရပါတော့တယ်။ အားကစားဘောင်းဘီလိုမျိုး အပျော့တွေ ၀တ်ဆင်တဲ့နေ့ တွေများ ပေါင်ကြားက ပစ္စတိုက ကျွန်တော့်ကိုချိန်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဟူး...ရင်ထဲမှာ တဒိတ်ဒိတ်ပဲဗျာ။ သွေးတွေပူနွေးလာသလိုခံစားရသလို စိတ်ထဲ ကတုန်ကယင်ဖြစ်လာသလိုပါ။ ဘာကြောင့်လည်းတော့မသိဘူး အဲဒီထက်ပိုပြီး မြင်ချင်တယ် ကြည့်ချင်လာမိတယ်။
တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောဖို့ sign in လုပ်လိုက်တော့ သူလေ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်မထားတဲ့အပြင် ဘောင်းဘီတိုနှင့်။ ပြီးတော့ သတိထားမိလိုက်တာက သူ့ဘယ်ဘက်နို့သီးခေါင်းလေးမှာ စတီးကွင်းလေးတပ်ထားတာ ကိုပေါ့။ ကျွန်တော်လည်းတပ်ထားသေးတယ်။ မာမီတို့ဆူမှာစိုးလို့ မသိအောင်တော့ သတိထားရတာပေါ့။ အဲဒါလေးကို အကြောင်းပြု မေးရင်းပြုရင်း ကျွန်တော့်မှာလည်း ရှိကြောင်းသူသိသွားပြီး သူ့ကို Web-cam ကတစ်ဆင့်ပြဖြစ်ရပါတယ်။ သူ့ကိုမလိမ်ချင်တာလည်းပါသလို ကျွန်တော့်ဘော်ဒီကို သူ့ကိုပြဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရလိုက်တာပေါ့လေ။
Me: "Web-cam အသစ်တစ်ခုလောက်ယူလိုက်ဦးမယ်။ Sign-out ခဏလုပ်လိုက်ဦးမယ်။ ခဏနေပြန်ဝင်ပြီးမှ အစ်ကို့ ကိုပြမယ်လေနော်။
Sai: "စိတ်ရှည်ရမှာပေါ့လေ။ မင်းဘော်ဒီကိုကြည့်ချင်နေတာ ကြာလှပြီသိလား ဟီးဟီး။မြန်မြန်သွား"
ပြောပြီးမှ စိတ်ထဲနည်းနည်းလန့်နေမိပါပြီ။ ကိုထွန်းနှင့်ကျွန်တော် chatting လုပ်တာ အချိန်ကာလတစ်ခုတိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အကြိမ် တော်တော်များများမှာ သူ့ကိုသာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မြင်ခဲ့ရတာကများပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဘယ်တုန်းကမှ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သူမမြင်ဖူးပါဘူး။ အခုတော့ နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ring လေးတပ်ထားတာ ပါးစပ်ဆော့မိတော့ ပြရပါတော့မယ်။
ကင်မရာကိုတပ် IMကို Log in လုပ်ပြီးတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျွန်တော့်ပုံရိပ်ကြည်ကြည်လင်လင်တွေကို သူ့ဆီ ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဗိုက်ထဲကပဲနာသလိုလို ရင်ထဲကပဲတင်းကျပ်နေသလိုလိုတော့ ခံစားရမိသားပါ။
'Hey, ငါအားလုံးမြင်ကြည့်ချင်တယ်ကွ၊ အခုဟာက ကုလားထိုင်ကိုပဲမြင်နေရတယ်' တဲ့ ကိုထွန်းကပြောတာများ စိတ်လှုပ် ရှားနေ သံကလှိုင်းထလို့။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိငြိမ်နေမိတာပါ။ သူဟာကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ဝက်လောက်က လွဲလို့ ဘယ်တုန်းကမှအပြည့်မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ကင်မရာရှေ့မှာ ထားရမှာ အလွန်ကြောက်ပါတယ်။
'နောက်ဆုံးတော့ ကုလားထိုင်မှာ အသာထိုင်၊ ပြီးတော့ ဘာမှမပြောဘဲ မျက်လုံးကို ပြတင်းပေါက်ဆီ လွှဲထားမိရပါတယ်။'
'Dude! You are hot!' ကိုထွန်းပါးစပ်က မထိန်းနိုင်စွာထွက်လာပါတော့တယ်။
ဟုတ်တော့ဟုတ်မယ် ကျွန်တော်က စကားပြောရင် မတိုးမကျယ်ပြောမိတဲ့အခါရှိသလို ရှက်တယ်လို့ ပြောမိတာ ခဏ ခဏဆိုတော့။
'အင်တာနက်ထဲမှာပဲ မြင်ရတာလေ၊ကြားရတာလေကွာ။ မင်းနို့သီးခေါင်းလေးမှာတပ်ထားတာ တယ်ကွကြည့်ရတာ။ စကားမစပ် မင်းကိုကြည့်ရတာ ရှမ်းအစစ်တော့ဟုတ်ပုံမရဘူး ထိုင်းကလူတွေလိုပဲနော် အသားအရောင်က'
သူ့မှတ်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ၀မ်းသာမိရသလိုလို ကျေနပ်မိသလိုလိုပါပဲ။ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး သူ့အမြင်တစ် ခုခုကိုကြားလိုက်ရလို့ပါ။ ကျွန်တော်က ဖာသိဖာသာနေတတ်တယ် အ၀တ်အစားဖက်ရှင် လည်း နောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ် ချင်နေ ဖြစ်ရင်ပြီးရောဝတ်တတ်တာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာပုံစံဖြစ်နေလည်း မသိဘဲ တစ်ခြားသူတွေထင်မြင်ချက်ပေးမှ ဂရိုစိုက်ကြည့်မိလေသတည်းလေ။ ကျွန်တော်ဝတ်စားတာက အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေလို့ တော်ပါသေးရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ အချိန်အတော်ကြာ စကားတွေပြောမိကြပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေထုံးစံအတိုင်း နည်းပညာ၊ ပစ္စည်း အသစ်အဆန်း၊ကောင်မလေးတွေအကြောင်း လိင်ကိစ္စအကြောင်းအပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ homosexual နဲ့ပတ်သက်တာ ကိုတော့ တစ်ခွန်းမှမဟဖြစ်ကြပါဘူး။
စကားတွေပြောကြရင်း ကိုထွန်းက 'ငါ personal မေးခွန်းနည်းနည်းလောက်မေးချင်တယ်၊ မေးရမလား'လို့ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော်အ သက်ပြင်းပြင်းရှူမိရရင်း ဒီထက်ပိုလာတော့မယ့်အနံ့တွေကို ရလာပါတယ်။
'Sure, ကျွန်တော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီပဲ'
'မင်း - တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ cybersex လုပ်ဖူးလား net ထဲမှာလေ'
'တစ်ခါ၊ ဒါပေမဲ့ ကင်မရာလည်းမရှိ ဘာမှမရှိဘူး။ အစ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေလိုမျိုး သူလည်းပြောတာပဲ။ သိပ်တော့ထူးထူး ခြားခြားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဗျ'
'ဟား ဟား....အခုမင်းကို ငါမြင်နေရပြီနော်။ မင်းအတွက် စားလို့ကောင်းမယ့် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးရှိတယ်ကွသိလား၊ စား မလား'
'Yeah, ဒါပေမဲ့ မှည့်နေတယ်မဟုတ်လား၊ ငါက၀မ်းပျင်းမှစားချင်တာကွ'
သူဘာပြောချင်တာလည်း ကျွန်တော်သိသလို သူလည်းရယ်ရယ်မောမောနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြောလာတယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်း ပြောရင်းပြောရင်း သဘာဝငှက်ပျောသီးက မှည့်ရာကနေ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်ဖို့ အရိပ်အယောင်ပြလာပါပြီ။ ကင်မရာရှေ့မှာ အ၀တ်တွေချွတ်ဖို့ မရှက်မိတော့သလို အလိုလိုတတ်လာတဲ့စကားလုံးတွေလည်း ပါးစပ်ကနေပြောထွက် မိသည်ပေါ့။
သူမတ်တပ်ရပ်တဲ့ ခဏမှာရော ရေထသောက်တဲ့အချိန်မှာရော ခပ်ထွားထွား အထုပ်အထည်ကိုမြင်မိရကြောင်း သူ့ကို စကားမစပ်ဖွင့်ပြောလိုက်မိတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမိရကြောင်းလည်းပါတာပေါ့။
Speedo ဘောင်းဘီ ပါးပါးလေးကို သူဝတ်ထားတာ သူ့ Rocket တံကြီးက ချက်ရှိရာကို အမြှောင်းလိုက်ညွှန်ပြနေတာ မြင်ရပါတယ်။ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ခေါင်းငြိမ့်ပြတာများ ဘောင်းဘီထဲက ခုန်ထွက်လာတော့မယ် မြင်ရတာများလေ။
ကင်မရာရှေ့က ခုံမှာထိုင်ရင်း ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကလည်း သံချောင်းဖြစ်စပြုလာပါပြီ။ ကဲဘယ်လိုလည်း 'come on ...come on' တဲ့ ကင်မရာထဲကတစ်ဆင့် ကိုထွန်းကို ပြန်လည်နှိုးဆွတဲ့သဘောဖြစ်စေသည်ပေါ့။ ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက ဂြိုဟ်ကြွပြီး ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေပုံကို သူ့ကို အသာလှစ်ပြလိုက်တာ သူ့မျက်လုံးတွေ အရောင် တောက်လာသလို လျှာကိုနှုတ်ခမ်းတွေဆီသပ်ပြတာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ လှပ်ကနဲဖြစ်ကရော။
စိတ်ထဲမှာ သွေးထဲမှာ အဟုန်ပြင်းပြင်းအရာတစ်ခုမောင်းနှင်နေသလိုပဲ။ လိင်ကိစ္စတစ်ခုထဲသာ အာရုံထဲရှိတော့တယ်။ ရှက်ရွှံ့တဲ့ဖီလင်တွေမရှိတော့ဘဲ ရှေ့ဆက်သွားဖို့သာ....။
ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက သားရေမျှော့ကြိုးကို တဖြည်းဖြည်းလျော့လိုက် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီး လက်ကလွှတ်လိုက်နဲ့ ဟိုတစ်ဖက်က ကြည့်ရတာအားမလိုအားမရဖြစ်လာတဲ့ပုံပါပဲ။ သူကတော့ ဘောင်းဘီထဲလက်နှိုက် သူ့ညီလေးကို ဂုတ်ချိုးစပြုပါပြီ။
ဘောင်းဘီကို ရှောကနဲချွတ်လိုက်တော့ မျှော့ကြိုးက အလွတ် ကျွန်တော့်Rocketကြီးဟာ ထောင်းကနဲအပေါ်ကို တန်း ထောင်သွားတာ ပခြုပ်ထဲက မြွေဟောက်ကြီး ရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ထလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်ဗျ... ဟီး။
ကိုထွန်းဆိုတဲ့ သူလည်း စကားလုံးတွေ မရွက်တော့သလို သူ့ကင်မရာကိုလည်း အောက်ပိုင်းကိုသာချိန်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းထို့အတူပဲပေါ့။
စားပွဲခုံအံဆွဲထဲက KY Jelly ကိုယူ လက်ဖ၀ါးထဲများများထည့် ပေါင်ကြားက ငထွားကို ဂုတ်ကကိုင်ကာ ထုထောင်းမိပါ တော့တယ်။ Head phone ကနေတစ်ဆင့်ကြားနေရတဲ့ အသက်ရှူသံ၊ လှိုက်မောသံ၊ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ တဖတ်ဖတ်အသံ တို့ကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ပိုလှုပ်ရှားရပါတယ်။
မျက်စိကိုအသာမှိတ်လိုက်တော့ အာရုံထဲမှာ ကိုထွန်းက ကျွန်တော့်ငပဲကိုသူ့လျှာလေးနဲ့ကလိလိုက် ငုံစုပ်လိုက်နဲ့။ အားရစရာကြီးတဲ့ 'အ...အ...ရှီး'။ သူ့လက်တွေနဲ့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆုပ်ကိုင်ပြီးထုပေးတာဗျ...အား။ good!
ကွန်ပျူတာ Scream ကိုကြည့်မိရာ ကိုထွန်းက သူ့လက်တွေကို အသားကုန်လှုပ်ရှားရင်း သူ့ရင်ဘတ်၊ ဘယ်လီကြွက်သား ၊ဆီးခုံ တို့မှာ အဖြူရောင်အနှစ်တွေကိုဖြန်းပက်လိုက်ရင်း အရင်ပြီးသွားပါတယ်။ အဲဒါတွေကို သန့်စင်ဖို့တဘက်ကို အသာ ထ အယူမှာ ကျွန်တော်ရှိရာဘက်ကို ပေးလိုက်တာ ရင်ကိုခုန်သွားရတာပ။ 'အ...အား...အ' ကျွန်တော်လည်းပဲ ဘောင်းဘီ ပေါ်ကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိရပါပြီ များမကြာခင်မှာပေါ့။ တစ်စက်မကျန်အားရပါးရ ပန်းထုတ်ပစ်မိတာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်တုန်းကနဲ့မတူ အရသာရှိပေစွ။
'အိုကေပါ၊ အဲဒါကအရေးမကြီးပါဘူး ဘာများကွာခြားသွားမှာမို့လည်း'
ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်မေးမိပါတယ်။ ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်နဲ့ ရည်းစားဦးကို အပြင်မှာသွားတွေ့ရတော့မလိုဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြင့်ပေါ့။ သူရန်ကုန်မှာပဲ၊ ရန်ကုန်မှာပဲနေသတဲ့။
သူကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကို အဖြေမပေးဘဲ မေးခွန်းတွေထပ်ထုတ်ပါတယ်။
'မင်းတို့အိမ်ကြီးက အဖြူရောင်နှစ်ထပ်အိမ်ကျယ်ကြီး ဟုတ်တယ်နော်'
ကိုထွန်းနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ဦးပိုင်းကာလတွေကစတင်လို့ ရန်ကုန်မှာ နေနေတဲ့အချိန်တစ်လျှောက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စကားစ တင်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရဲ့မနီးမဝေးအိမ်ကလူဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကျောင်းတွေစ တင်တက်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ ညတိုင်းစကားပြော ဒါမှမဟုတ် cybersex လုပ်ဖို့ နှစ်ဦးသားအတွက် မလိုအပ် တော့ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်ရံ နောက်ကျပြန်ရောက်တဲ့ ညတွေကိုဖြတ်သန်းရတဲ့အခါ နှစ်ဦးလုံးအိပ်ယာထဲမှာပဲ နေဖို့ အာသီသရှိကြတယ်။ နောက်ပြီး chat ဒါမှမဟုတ် jack-off လုပ်ဖြစ်ကြတယ်လေ အင်တာနက်သုံးပြီးတော့ပေါ့။ များမကြာမီ အပြင်မှာတွေ့ ဖြစ်ကြတော့မယ်ထင်ရဲ့။
'ကဲ....သူငယ်ချင်းတို့ရော ဘယ် Internet buddy ကအကောင်းဆုံး အသင့်တော်ဆုံးလည်း မင်းတို့အတွက်လေ?'
Posted by Alex Aung at 2:55 PM